Sagaal ciyaaryahan oo xagaagan laga fasaxayo Chelsea… (& Jorginho oo hoggaaminaya) – Gool FM
Sagaal ciyaaryahan oo xagaagan laga fasaxayo Chelsea… (& Jorginho oo hoggaaminaya)
Ahmed Nur April 6, 2021
(London) 06 Abril 2021. Kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa dooneysa inay suuqa geyso xiddigo dhowr ah kuwaasoo uu mugdi ku jiro mustaqbalkooda kooxda reer England.
Tababaraha Blues ee Thomas Tuchel ayaa ku fikiraya inuu aas-aaso koox awood badan taasoo ku dhisan xiddigaha uu u maleynayo inay si wacan u fahmi karaan heykalkiisa ciyaareed.
Sidaas darteed, kooxda London ka dhisan ayaa xiddigaha aanan inta badan la isticmaalin dooneysa inay ka fasaxdo garoonka Stamford Bridge.
Warbaahinta dalka Ingiriiska ayaa tibaaxaya in sagaal xiddig laga fasaxayo Chelsea xagaagan, waxaana xiddigaha ugu cad cad inay ka hayaamayaan galbeedka London qayb ka ah Goolhaye Kepa Arrizabalaga iyo xiddiga khadka dhexe ka ciyaara ee Jorginho.
Haddaba halkan hoose kaga bogo sagaalka ciyaaryahan ee ay Blues fasaxeyso iyo kooxaha ay ku biiri karaan.
Weeraryahankan ayaa lumiyay booskiisa Chelsea tan iyo imaanshiyahii Thomas Tuchel, waxaana 23-jirkan la filayaa inuu xagaagan isaga hayaamo Blues.
Qaar ka mid ah kooxaha darajada dhexe ee horyaalka Premier League ka ciyaara ayaa aad u baacsanaya laacibka reer England.
Bandhiggiisa liitay ee xilli ciyaareedkii hore ayaa sababtay in Chelsea ay la soo saxiixato Edouard Mendy, kaasoo noqday goolhayaha koowaad ee shaxda Macallin Tuchel, waxaana hadda la is weydiinayaa mustaqbalka Kepa.
Xiddiga reer Spain ayaa doonaya inuu horyaalka La Liga u dhaqaaqo si uu dib ugu helo bandhiggiisii hore, halka Blues ay dooneyso iibinta xiddigan, sidaas darteed, dan laba daraf ah ayaa riixeysa in Arrizabalaga uu ka huleelo Galbeedka London.
Daafaca Taliyaaniga ah ayaanan mustaqbal ifaya ku lahayn Stamford Bridge waxaana lala xiriirinayay labadii xagaa ee lasoo dhaafay ku laabashada dalkiisa iyadoo qandaraaskiisa uu dhici doono xagaaga dambe.
Kooxda kubadda cagta ee Juventus ayaa xiiseyneysa xiddigan asal ahaan kasoo jeeda dalka Brazil balse u ciyaara xulka Italy, waxaana uu ku jiraa xiddigaha ay Chelsea iska iibineyso xagaagan.
Sida Emerson oo kale, qandaraaska difaaca Jarmalka u dhashay ayaa dhici doono xagaaga 2022, waxaana xiddigan uu qayb ka yahay xiddigaha aanan qorshaha ugu jirin Tababare Tuchel.
Inkastoo uu qaab wacan ku jiro tan iyo xukunkii macallinka ay isku dalka yihii, misena taas kama dhigna in xiddigii hore ee AS Roma uu damaanad qaad u heysto inuu dalab heshiis cusub ah ka helo kooxda Blues.
Laacibkan ayaa bandhig cajiib ah ka sameynaya horyaalka Serie A ee dalka Taliyaaniga isagoo qaab amaah ah ugu ciyaaraya naadiga AC Milan.
Kooxda Taliyaaniga ka dhisan ayaa dooneysa inay joogto u baddesho heshiiska amaahda ah ee xiddiga reer England uu kula joogo.
Inkastoo aysan wali bilaaban wada xaajoodka ku saabsan heshiiskaas oo ay Milan u baahan tahay inay bixiso 25 milyan oo gini si ay u dhammeystirto, hadda agaasimaha Rosseneri ee Paulo Maldini ayaa dadaal ugu jira inuu gacanta ku dhigo heshiiska joogta ah ee 23-sano jirkan.
Inkastoo laacibkan uu heysto aaminaadda macallinkiisa Thomas Tuchel, haddana wararka England ka imaanaya ayaa sheegaya inuusan Jorginho ku faraxsaneyn nolosha magaalada London.
29-jirkan ayaa doonaya inuu ku laabto kooxdiisii hore ee Napoli oo markale u gacan haatineysa, xilli Chelsea ay dooneyso in iibinta xiddigan ay ka faa’ideysato haddii ay ku hesho qiimo macquul ah.
Ross Barkley / Ruben Loftus-Cheek / Michy Batshuayi
Saddexdan laacib ayaanan bandhig wanaagsan ku heysan kooxaha ay amaahda ku joogaan xilli ciyaareedkan, waxaana aad loola xiriirinayaa inay iib ka yihiin Stamford Bridge.
Tababare Tuchel ayaa doonaya inuu xiddigahan iska iibiyo guud ahaan, si suuqa xagaaga uu xiddigo waxtar leh ugu soo biiriyo safkiisa.
DEG-DEG: Mid ka mid ah xiddigaha ugu muhiimsan ee Real Madrid oo laga helay Korona Fayras
Juventus oo xaqiijisay in xiddig kale oo ka tirsan kooxdeeda koowaad laga helay Korona Fayras